Seranam-piaramanidina ao Maorisy : polisy maorisianina sy Malagasy iray nahatrarana héroïne | NewsMada
Seranam-piaramanidina ao Maorisy : polisy maorisianina sy Malagasy iray nahatrarana héroïne
Voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina tao amin’ny seranam-piaramanidina ao Maorisy ny alahady teo, ny teratany Malagasy iray nitondra héroïne niainga avy aty Madagasikara. Hita tao anaty camera de surveillance ny fihetsiny rehetra sy ny polisy maorisianina niray tsikombakomba taminy…
Araka ny fampitam-baovao navoakan’ny gazety maorisianina mpiseho isan’andro, nigadona tao amin’ny seranam-piaramanidina ao Maorisy tamin’ny 7 ora sy 30 mn hariva, ny alahady teo ny fiaramanidina zotra MK 289 niainga avy eto Madagasikara. Nandeha tamin’io fiaramanidina ilay teratany Malagasy talen’ny kaompaniam-pitaterana iray eto Madagasikara izay tratran’ny polisy miady amin’ny zava-mahadomelina ao Maorisy. Nohamafisin’ity gazety ity hatrany fa hita tao anatin’ny camera de surveillance tamin’ny 7 ora sy 55 mn ny fihetsik’ilay teratany malagasy nivoaka sy niditra tao amin’ny trano fivoahana ao amin’ny seranam-piaramanidina niaraka tamin’ny kitapo kely. Minitra vitsy taorian’izay, nanaraka azy avy ao aoriana nitsofoka tao amin’io trano fivoahana io koa ny polisy maorisianina iray tompon’andraikitra misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina eo anivon’ny seranam-piaramanidina ao Maorisy. Tao amin’ny trano fivoahana no nifanoloran’ilay teratany malagasy sy ilay polisy niray tsikombakomba taminy ilay héroïne tanaty boaty kely roa. Tsy namonjy ny asany intsony ilay polisy taorian’izay ka nampiahiahy ny tompon’andraikitra teo anivon’ny seranam-piaramanidina.
Niroso tamin’ny fanadihadiana avy hatrany ny polisy tao amin’ny seranam-piaramanidina ka tratra tany amin’izy ireo ireo boatikely roa nisy vovoka heroine nentin’ilay teratany Malagasy avy aty Madagasikara ka niarahany niray tsikombakomba tamin’ity polisy maorisinina ity.
Nosamborina ny alatsinainy teo ilay polisy maorisianina.
Jereo amin’izany ny any Maorisy rehefa mandika lalàna dia tsy maintsy ampiharina amin’ny lalàna na mpitandro filaminana aza. Mifanohitra amin’izany anefa ilay tranga niseho teny Ivato fa begalona bokotra dimy avy ao amin’ny tafika no miditra an-keriny eny amin’ny seranam-piaramanidina maka an-keriny ireo olona tratra nanao trafikana volamena.